Falanqaynta Kulanka Hellas Verona Vs Juventus ee Horyaalka Serie A Taliyaaniga
Home Falanqeynta Kulamada Falanqaynta Kulanka Hellas Verona Vs Juventus ee Horyaalka Serie A Taliyaaniga
Labada Kooxood ee Verrona iyo Juventus ayaa ku kulmaya Garoonka Stadio Bentegodi Kulan qeyb ka ah Horyaalka Serier A Kulamadiisa 24-aad.
Garoonka M. A. Bentegodi
Verona:- Kooxda martida loo yahay ayaa seddex ciyaaryahan ka dhaawacan kulanka Juventus. Nikola Kalinic (muruqa), Ebrima Colley (jilibka) iyo Federico Ceccherini (muruqa) dhammaantood lama heli karo kulankan.
Ma jiraan wax walwal ah oo ganaax ah oo uu qabo tababare Ivan Juric.
Juventus:- Waxaa jira shan ciyaartoy oo dhaawac looga saaray. Paulo Dybala (raaxo daro jireed), Giorgio Chiellini (kubka), Leonardo Bonucci (murqaha), Juan Cuadrado (muruqa) iyo Arthur (muruqa) dhamaantood diyaar uma ahan xulashada kooxda.
Tababare Andrea Pirlo sidoo kale waa inuu ka maqnaado Danilo, kaasoo ganaax ku maqan.
Kulankan ayaa noqonaya kii 21-aad ee ay wada ciyaaraan labada kooxood iyada oo la filayo in ay kooxda Juventus haysato rikoorkii ugu fiicnaa kulamadii hore ee ay labada kooxood wada ciyaareen
Kooxda Turin ka dhisan ayaa heysata 13 guul iyo afar barbaro, halka ay seddex jeer oo hore guuldaro la kulantay.
Kulankoodii ugu dambeeyay wuxuu yimid Oktoobar 2020 markii goolal ay kala dhaliyeen Andrea Favilli iyo Dejan Kulusevski ay u xaqiijiyeen in labada dhinac ay wadaagaan qasaarooyinka barbardhac 1-1 ah.
Kooxda martida loo yahay waxay ku jirtay qaab aan feecneyn, iyadoo labo guul heshay shantii kulan ee ugu dambeysay Serie A. Juventus lafteedu ma aheyn koox soo jiidasho leh, laakiin waxay ku soo laabteen wadada guusha.
Previous articleFalanqaynta Kulanka Sevilla Vs Barcelona ee Horyaalka La liga Spain
Next articleShax laga sameeyey xidigo si xor lagu heli karo bisha June.